Tag: kutendeuka optimization | Martech Zone
Tag: kutendeuka optimization
Shanduro Yekushandura Kugadziridza: 9-Nhanho Gwara Kuwedzera Yekutendeuka Mitengo
Chipiri, Kurume 2, 2021 Chipiri, Kurume 2, 2021 Douglas Karr
Sevashambadziri, isu tinowanzo kushandisa nguva kugadzira mishandirapamwe mitsva, asi isu hatiwanzo kuita basa rakanaka tichitarisa mugirazi kuyedza kukwidziridza edu ekushambadzira uye maitiro online. Zvimwe zveizvi zvinogona kungova kuti zvinoremedza… unotangira kupi? Iko kune here nzira yekushandurwa chiyero optimization (CRO)? Zvakanaka hongu… zviripo. Chikwata chiri paConversion Rate Nyanzvi chine yavo CRE Methodology iyo yavanogovana mune ino infographic yavakaisa
3 Matanho eemail Ekushambadzira Nhevedzano Anowedzera Mitero Yekutendeuka
Muvhuro, Ndira 25, 2021 Muvhuro, Ndira 25, 2021 Douglas Karr
Kana kushambadzira kwako kwakawanda kwakarondedzerwa sefanera, ini ndaigona kutsanangura yako email kushambadzira semudziyo kutora zvinotungamira zvinowira mukati. Vanhu vazhinji vachashanyira yako saiti uye vachitoita newe, asi pamwe haisi nguva yekunyatso shandura. Izvo chete anecdotal, asi ini ndichatsanangura maitiro angu pandinotsvaga chikuva kana kutenga online: Kutenga-pre-kutenga - ini ndichaongorora mawebhusaiti nemagariro enhau kuti ndiwane ruzivo rwakawanda rwandinogona nezve
MAZUVA: Kurisa Imba Yako kana Yekumhara Peji neaya manomwe Zvidimbu Zvemukati
China, June 6, 2019 Mugovera, June 8, 2019 Douglas Karr
Kwemakore gumi apfuura, tanyatsoona vashanyi pamawebhusaiti vachiita zvakasiyana. Makore apfuura, takavaka masayiti akaratidzira zvigadzirwa, maficha, neruzivo rwekambani… zvese izvi zvaive zvakanangana nezvakaitwa nemakambani. Zvino, vatengi nemabhizinesi zvakafanana vari kumhara pamapeji epamba uye mapeji ekumhara kuti vatsvage kwavo kwavanotevera kutenga. Asi ivo havasi kutsvaga runyorwa rwezvako maficha kana masevhisi, ivo vari kutsvaga kuti vaone kuti iwe unozvinzwisisa uye kuti ndiwe ndiwe